/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ဘယ်လို Orlistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သလဲ
အပေါ် Posted 03 / 02 / 2020 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမှထုတ်ပြန်သောအချက်အလက်များအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လူ ဦး ရေတွင်အဝလွန်မှုနှုန်းအရကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့် ၁၂ တွင်ရှိသည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန (CDC) မှခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀- နှစ်အောက်အရွယ်အမေရိကန်လူမျိုး ၃၆.၉% သည်အ ၀ လွန်သူများဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူသောအချက်အလက်များအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရအမျိုးသမီး ၄၁.၁% နှင့်အမျိုးသား ၃၇.၉% - သို့မဟုတ်သန်း ၁၆၀ ကျော်ရှိသောအမေရိကန်များသည်အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်လှန်နေရသည်။ လက်ရှိကိန်းဂဏန်းများအရလွန်ခဲ့သောအနှစ်သုံးဆယ်အတွင်းအမေရိကန်လူ ဦး ရေတွင်အဝလွန်မှုနှစ်ဆတိုးလာကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒေတာဖြစ်စေ, အမေရိကန်လူငယ်များအတွက်အများကြီးပိုကောင်းမကြည့်ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ကလေးအားလုံး၏ ၁၅% ခန့်သည်အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းဖြစ်ကာ၎င်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃ ဆပိုများသည်။
အဝလွန်ခြင်းပြည်နယ်မှအချက်အလက်များအရအပြုအမူဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များစောင့်ကြည့်ရေးစနစ် (BRFSS) မှမကြာသေးမီကအချက်အလက်များအရပြည်နယ် ၉ ခုတွင်အဝလွန်မှု ၃၅% ကျော်ရှိသည်။ Kansas၊ Florida၊ နယူးမက္ကစီကို၊ Utah၊ မစ်ဆူရီ၊ မင်နီဆိုတာနှင့်နယူးယောက်တို့အားလုံးသည် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းလူကြီးများနှင့်ကလေးများအဝလွန်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်အ ၀ လွန်ရောဂါကူးစက်မှုကိုအမေရိကန်ကအဘယ်ကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိလူကြီးများနှင့်ကလေးများအားအကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။ အဝလွန်ခြင်းသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်အစားအသောက်အလေ့အထများကိုညံ့ဖျင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကလေးများသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကထက်အိမ်ပြင်တွင်ကစားခြင်းနည်းပါးပြီးနည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဗွီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ကလေးများကိုအထိုင်များစေသည့်အခြားဖျော်ဖြေမှုပုံစံများပါ ၀ င်သည်။
လူကြီးများသည်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အစားအစာဖြန့်ဝေခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနာရီနှင့်အမျှအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်အပိုအဆင်ပြေစေရန်အားလုံးသည်ကယ်လိုရီအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အပိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလောင်ကျွမ်းရန်လေ့ကျင့်ခန်းမလုံလောက်ပါ။
သင်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အတွက်ကယ်လိုရီများများစားခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာဆီသို့ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကိုအဆီအဖြစ်သိုလှောင်ထားသည်။ ညံ့ဖျင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုများ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်အဆီဓာတ်မများသောကယ်လိုရီသိပ်သည်းသောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အဝလွန်ခြင်းအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
AASraw သည်ထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်ဒါ - အော့စလစ်အမှုန့်များ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ စျေးနှုန်းအချက်အလက်အတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ ဆက်သွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို
1. Orlistat ဆိုတာဘာလဲ?
အဝလွန်ခြင်းသည်ဘေးဒဏ်သင့်သူတစ် ဦး ၏ဘဝအရည်အသွေးကိုကန့်သတ်သည်။ သို့သော်များစွာသောအမေရိကန်များအဝလွန်ခြင်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သော်လည်းအနည်းငယ်သောလူများသည်အဝလွန်ခြင်းသို့တိုးတက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
အဝလွန်သူနှင့်အဝလွန်သူအများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ရှိသောအစားအသောက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အသိပညာနှင့်စည်းကမ်းမရှိကြပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းစတင်မှုပြုသူများအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်သည်။
အမှန်မှာကိုယ်အလေးချိန်ပိုနေလျှင်သို့မဟုတ်အဝလွန်နေသည့်အချိန်၌အနည်းငယ်ကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အစားအစာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခြင်းဟာအ ၀ လွန်သူတစ် ဦး အတွက်သိသိသာသာဆက်ကပ်အပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းအာဟာရဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုသည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတွက်ဆေးဝါးဗေဒဖြေရှင်းချက်များ၌စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအောင်မြင်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆေးဝါးသုတေသန၏“ သန့်ရှင်းသောမြက်ခင်း” သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဆေးပြားကိုတီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။
OrlistatAlli နှင့် Xenical အမည်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအရအဝလွန်သူများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသောအံ့ဖွယ်အလေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အဝလွန်သူများသည် ၆၀ မီလီဂရမ် (Alli) ဖြင့် Orlistat ကိုကောင်တာပေါ်မှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ 60mg (Xenical) ဗားရှင်းသည်ဝယ်ယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းလိုအပ်သည်။ ယေဘူယျဗားရှင်းမြောက်မြားစွာကိုလည်းအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Orlistat သည်လူတစ် ဦး ၏အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ရည်ရွယ်သောဆေးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအဲဒါကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့ဆေးလို့မခေါ်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့အစားအသောက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်နေတုန်းပဲ။
သို့သော်အသုံးပြုသူ၏အစီရင်ခံစာများအရအ ၀ လွန်သူတစ် ဦး ချင်း၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောအာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူအုပ်ချုပ်သည့်အခါ Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြန်ရန်အတွက်အလွန်ထိရောက်သောဆေးဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အထက်လူကြီးများတွင် Body Mass Index (BMI) ၂၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိလျှင် ၆၀ မီလီဂရမ် Orlistat ဆေးပြားများကိုကောင်တာပေါ်မှ ၀ ယ်နိုင်သည်။ BMI ၃၀ ကျော်သောအ ၀ လွန်သူများသည်၎င်းတို့၏ဆရာ ၀ န်ကို ၁၂၀ မီလီဂရမ် Orlistat ဆေးပြားများနှင့်ဆေးညွှန်း သုံး၍ ဆေးညွန်းရန်ဆေးညွန်းစာပေးပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အစားအစာ.
ဆီးချိုရောဂါ (သို့) သွေးပေါင်ချိန်စသည့်အခြားကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုများကိုကိုင်တွယ်ပါက BMIs နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အသက် ၂၇ နှစ်အောက် ၁၂၀ မီလီဂရမ်အသုံးပြုမှုကိုဆရာဝန်များကအတည်ပြုနိုင်သည်။ Orlistat ကိုသုံးသောသူများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သူတို့၏အာမခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်ကိုကာမိစေရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သို့သော်အာမခံအားလုံးမဟုတ်ပါ။ Orlistat ပေးသွင်းသူအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်းသည်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အွန်လိုင်းရောင်းသူများအတွက် Orlistat စျေးနှုန်းလမ်းညွှန်ချက်သည်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
ဒီတော့ Orlistat ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Orlistat သည်သင်စားသောအစာ၌အဆီကိုစုပ်ယူခြင်းမှ GI လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်၏အစားအစာအတွင်းရှိစုပ်ယူထားသောအဆီသည်သင်၏အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်၍ ခန္ဓာကိုယ်ကမစင်နှင့်အတူထုတ်လွှတ်သည်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းများတွင်ဂရမ်တိုင်းတွင်စွမ်းအင် ၄- ကယ်လိုရီပါရှိသည်။ သို့သော်အဆီဂရမ်တွင် ၉ ကယ်လိုရီပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, နောက်ကွယ်မှစိတ်ကူး Orlistat ၏အသုံးပြုမှု အဝလွန်သူများကိုဤကယ်လိုရီသိပ်သည်းသောအာဟာရကိုစုပ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
အဝလွန်သူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကိုစားသုံးကြပြီးသူတို့၏အစားအစာရွေးချယ်မှုများသည်မကျန်းမာပါ။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အ ၀ လွန်သူတစ် ဦး ၏အစားအစာကိုကျန်းမာသောရွေးချယ်စရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အဝလွန်သူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းမှုတွင်တစ်ပတ်နှင့်တစ်ပတ်ချက်ချင်းရလဒ်များကိုစတင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
သို့သော်အပြင်းအထန်အဝလွန်သူများသည်ကျန်းမာသော BMI သို့မပြန်မီအစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အချက်များပြောင်းလဲခြင်းကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် ၃ မှ ၅ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၌ဤပြင်းအားကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်မည်သည့်လူသားအတွက်မဆိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အပြင်းအထန်အဝလွန်သူများသည်ရလဒ်များကိုအရှိန်မြှင့်ရန် Orlistat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူတို့၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုဖြည့်နိုင်သည်။
2. Orlistat ကို FDA ကအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်ဟုအတည်ပြုပါသလား။
မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဆိုကဲ့သို့ Orlistat သည် FDA မှစေ့စပ်သေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Orlistat FDA ၏ခွင့်ပြုချက်ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် CAS နံပါတ်ဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည် 96829-58-2.
FDA သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ၌ဆေး၏ဗားရှင်းအမျိုးအစားများကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောဆေးဝါး၏ Xenical version ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Xenical ကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာရနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
FDA က Alli (60mg Orlistat) ကိုအသက် ၁၈ နှစ်အထက်အဝလွန်သူများအတွက်အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် 18mg ဗားရှင်းကိုကောင်တာမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ OTC ဗားရှင်းသည်ကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ရှိသော၊ အဆီနည်းသောအစားအစာနှင့်သာအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သော်လည်းအဝလွန်သူများအတွက်လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာတရားဝင်အထောက်အထားမရှိပါ။ Orlistat ဝယ်ဖို့ ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော။
Orlistat ၏အမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်း Alli နှင့် Xenical အသုံးပြုသူများအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ FDA ကအစီရင်ခံစာများအားလုံးကိုခြေရာခံသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဆေးဝါးအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အသိပေးချက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုအေဂျင်စီမှရရှိခဲ့သည်။
ဤဆိုးကျိုးများသောကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အလားအလာရှိသောသုံးစွဲသူများကိုကြောက်ရွံ့စေနိုင်သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာအများပြည်သူက FDA သို့အစီရင်ခံတင်ပြသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များသည် Alli နှင့် Xenical တို့နှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီး Orlistat မဟုတ်ပါ။
ယနေ့အထိ Orlistat သည် Alli နှင့် Xenical သုံးစွဲသူများကြုံတွေ့ရသောဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုအကြံပြုနိုင်သောအထောက်အထားမရှိပါ။ ဤပြproblemsနာများသည်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှဖြစ်နိုင်သည်မှာလုံးဝဖြစ်နိုင်သည်။
FDA သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် Alli နှင့် Xenical အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အဆိပ်ဖြစ်စေသောပြinvestigနာများကို ဆက်လက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆေးဝါးများ၏လုံခြုံမှုနှင့်အတည်ပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ကြေညာချက်ကိုမျှထုတ်ပြန်ရန်မရှိသေးပါ။
FDA သည်၎င်းသည်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ် (၁၀) ခုတွင် (၁) ခုမှသာလျှင်အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းအပေါ်တွင်လည်းစိုးရိမ်မှုရှိသည်။ အေဂျင်စီသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Alli ၏အသည်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှုကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုများအရ Xenical အမှတ်တံဆိပ်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပြင်းထန်သောအသည်းအဆိပ်သင့်မှုနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ကြိုတင်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု၊ လက်တွေ့၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ (၃)
လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရ Xenical သည်ပြင်းထန်သောအသည်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
သို့သော် FDA က Xenical ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အသည်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းနှင့် Alli ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စျေးကွက်လွန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၁၂ ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုလေ့လာခြင်းကရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းမပါသောသို့မဟုတ်ဆေးညွန်းသွင်းထားသောဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအထောက်အကူပြုအချက်များသည်ဤကိစ္စများတွင်ပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (၄)
3. အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် Orlistat
နောက်တစ်ခါသင်၏ဒေသခံ GNC တွင်ဖြည့်စွက်သည့်အတန်းကိုလမ်းလျှောက်သောအခါအဆီဆုံးရှုံးမှုအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်ကုန်များစွာကိုပါဝါနှင့်ဆေးပုံစံဖြင့်တွေ့ရမည်။ The ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက် စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဘီလီယံရှိတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဆေးမဟုတ်ဘဲကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ဆေးမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုများများစားစားသောက်လျှင်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ဆွခြင်းနှင့်အပူချိန်အနည်းငယ်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော thermogenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။
သို့သော်တစ် ဦး ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှု ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သော Orlistat ကဲ့သို့ဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေပြီးသင့်ကျန်းမာရေးကိုကြာရှည်စွာထိခိုက်နိုင်သည်။
Orlistat သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်သူတို့၏ protocol ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤနည်းဗျူဟာသည်အသုံးပြုသူအားသူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးအကျယ်ပြtroubleနာဖြစ်စေသည်။ Orlistat ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုနှင့် တွဲဖက်၍ သာအသုံးပြုပါ။ အထူးသဖြင့်သင် 120mg ပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။
A: Orlistat ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုနည်း။
အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ ၁၂၀ မီလီဂရမ်ပုံစံကိုအသုံးပြုသောအခါ Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်အသုံးပြုခြင်းကိုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၏အကြံပြုချက်အတိုင်းလိုက်နာရမည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေမည့်အစီအစဉ်ကိုမစတင်မှီ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ပြောင်းလဲရန်အတွက်မှန်ကန်သောအတွေးအခေါ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
အဝလွန်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သူတို့၏ပြproblemsနာများအတွက်အဖြေမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ လုံလောက်သောရေရှည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာအစားအသောက်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်များနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များစတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဤအတွေးအခေါ်မရှိပါကအဝလွန်သူသို့မဟုတ်အဝလွန်သူတစ် ဦး သည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အားထုတ်မှုမှရရှိလိုသောရလဒ်များကိုမမြင်ရပါကနောက်ဆုံးတွင်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းအပေါ်မှီခိုရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဤကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်သုံးစွဲသူ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည့်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Orlistat ကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုသုံးပါကကွန်တိန်နာတွင်ဖော်ပြထားသောသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်၊ Orlistat သောက်သုံးသော တစ် ဦး ချင်းစီ၏ BMI ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဆေးကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ထက် ပို၍ ကြာကြာမခံပါနှင့်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုတွင်ထည့်ပါ။
အ ၀ လွန်သူနှင့်အဝလွန်သူများသည် Orlistat ကိုအထူး၊ အဆီနည်းပြီးကယ်လိုရီကန့်သတ်သောဓာတ်စာနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အစားအစာအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရာတွင်အာဟာရဓာတ်ပါ ၀ င်သူများသည်မည်သည့်အစာ၌မဆိုအဆီ၏စုစုပေါင်းကယ်လိုရီ၏ ၃၀% ထက် ပို၍ မပါဝင်ကြောင်းသေချာစေသင့်သည်။
အဝလွန်သူတစ် ဦး သည်သူတို့၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး Orlistat ကိုဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းထိုးရမည်။ ဆေးထိုးသည့်စည်းမျဉ်းအများစုသည်တစ်နေ့လျှင်ဆေးသုံးချောင်းစီထုတ်ပေးသည်။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်အစားအစာကိုကျော်သွားလျှင်၎င်းအစာအတွက်လိုအပ်သည့် Orlistat ဆေးကိုသူတို့ကျော်သွားရမည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစာစားပြီး (သို့) အဆီပါ ၀ င်သည့်အစာကိုစားပါကသင်၏ Orlistat ဆေးပမာဏကိုကျော်လွန်ပါ။ အသုံးပြုသူသည်အစားအစာများရှိအာဟာရတံဆိပ်များကိုစတင်သတိပြုသင့်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အာဟာရများစာရင်းကိုဖတ်ပါ၊ အဆီများသောအစားအစာများကိုရှောင်ပါ။
Orlistat သည်သင်၏အစားအစာတွင်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်များကိုသင့်လျော်စွာစုပ်ယူမှုနှင့်လည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူနာများအနေဖြင့်ဆရာဝန်အားဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်၎င်းတို့စုပ်ယူနိုင်သည့်ဗီတာမင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအကြံပြုသင့်သည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်သူတို့၏ဆေးပမာဏနှင့်သောက်သုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်သင့်သည်။ Orlistat off-script ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ရန်အလားအလာရှိသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အသုံးပြုခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါကအခြားလူများကသင်၏ဆေးကိုထိုးကျသွားနိုင်သည်။
Orlistat မသောက်မီအနည်းဆုံး ၂ နာရီ ကြိုတင်၍ မည်သည့်ဖြည့်စွက်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးကိုမဆိုသောက်ပါ။ ဤဆေးထိုးနည်းသည်သင်အသုံးပြုကောင်းသုံးနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင်မည်သည့်ဆေးဝါးမျိုးကိုမဆိုသုံးစွဲနေပါက Orlistat ကိုမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်အားသေချာပြောပါ။
B: Orlistat ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ငါဘာကိုရှောင်သင့်သလဲ။
သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်သင်၏အစီအစဉ်အကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါကသင်၏အခြားကျန်းမာရေးပြallနာများအားလုံးကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါစေ။ Orlistat ကိုမချခင်ဆရာဝန်ကသင်သောက်နေတဲ့ဆေးတွေအားလုံးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။
Warfarin (Coumadin) ကဲ့သို့သောသွေးဖြန်းဆေးများ။
၎င်းသည် Orlistat အသုံးပြုမှုကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည့်ဆေးဝါးစာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
Orlistat ကိုအသုံးပြုသောအခါဆေးဝါးများ၊ ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်သင်သုံးသောအခြား OTC ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ရက်ချိန်းယူပါ။
ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမသင်မနေသင့်ဘူး Orlistat ယူပါ ပထမ ဦး ဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ။ OTC အသုံးပြုရန် 60mg ဗားရှင်းကိုအလွယ်တကူရနိုင်သော်လည်းအသုံးပြုသူသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွင်မထည့်သွင်းမီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
မြင့်မားသောဆေးများသို့မဟုတ်ကြာရှည်စွာသောက်သောအခါ Orlistat သည်ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Orlistat တွင်အလွန်အကျွံသောက်မည်ဟုထင်သောသူများသည်အဆိပ်အကူအညီ hotline ကိုချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပြီးလူနာတင်ယာဉ်ကိုခေါ်သင့်သည်။
ဆေးဝါးတွင်ပါဝင်သောအရာများနှင့်ဓာတ်မတည့်ပါကလူနာများအနေဖြင့် Orlistat ကိုမသောက်သင့်ပါ။ အောက်ပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုခုနှင့်သင်ဆက်ဆံနေလျှင် Orlistat ကိုမသောက်ပါနှင့်။
နာတာရှည် malabsorption syndrome ရောဂါ
ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစားငါသို့မဟုတ် II ကို
ထိုကဲ့သို့သော anorexia သို့မဟုတ် bulimia အဖြစ်အစားအသောက်မူမမှန်
လက်ရှိအခြားကိုယ်အလေးချိန်ဆေးသို့မဟုတ် OTC ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု။ လျှင်
4. Orlistat အသုံးပြုခြင်းမှအဘယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
လူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်“ အံ့ဖွယ်နည်းသောကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေး” ကဲ့သို့သောအရာမရှိကြောင်းနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Orlistat ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ရှိသောအစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်နှင့်အတူအဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝလွန်သူများအတွက်အလေးမခြင်းအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောမျှော်လင့်ချက်များထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
Orlistat အကျိုးသက်ရောက်မှုများ လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာလူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းရှိသည်။ သို့သော်သင်အဆီဆုံးရှုံးမှုနှုန်းသည်အသင့်အတင့်သာရှိမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ၎င်းဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများထက်တစ်ပတ်လျှင်ပေါင်အနည်းငယ်ပိုမိုသက်သာစေသည်။
သို့သော်အမြန်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ အခွင့်အလမ်းတွေကလူနာတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ရှိအဝလွန်မှုအခြေအနေကိုရောက်ရှိဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာပင်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်အဆီတစ်ညသည်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွင်းအရည်ပျော်သွားမည်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူအားသူတို့၏ရလဒ်များကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေပြီးစိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်။
ဆရာဝန်များသည်လက်တွေ့ကျသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်တစ်နှစ်အတွင်းလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကို ၅% နှင့်အထက်လျှော့ချခြင်းဟုသတ်မှတ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ ၄၀ ရာနှုန်းကျော်သည် အသုံးပြုသူများ orlistat ဆရာဝန်နှင့်အာဟာရပညာရှင်များ၏အကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာပါကဤရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီစေပါ။
လေ့လာမှုအရကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောအစားအသောက်များကိုစားသုံးသူများသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Orlistat ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Orlistat ကိုမသုံးသောထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ထက်ပျမ်းမျှ ၅.၇ ပေါင်ပိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ (၅,5.7)
(1) Orlistat အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချသည့်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Orlistat ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဆေးသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအဆီမ ၀ င်စေရန်တားဆီးရာတွင်ထိရောက်သောကြောင့်လူနာမှရရှိသောစုစုပေါင်းကယ်လိုရီပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာအတွက်အသုံးဝင်သည့်အပြင်သိသာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းလူတို့အားဤဆေးကိုချိုင်းထောက်အဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်၏အုတ်မြစ်အဖြစ်ဆေးညွှန်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အပေါ်မှီခိုသူများသည်လျော့နည်းရလဒ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
အချို့သောသူများသည်သူတို့၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်များကိုမပြောင်းလဲဘဲအစားထိုးလုပ်ကိုင်ရန် Orlistat ကိုမှီခိုကြသည်။ သို့သော်ဤတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။
အကျိုးကျေးဇူးများကို Orlistat သတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်များရှိသည့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစီအစဉ်။ လူနာသည်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းမှုတစ်ခုတည်းကိုပြီးမြောက်ရန်အသိပညာသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
အဝလွန်သူများနှင့်အဝလွန်သူအများစုသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အစာအာဟာရကိုစတင်စားသုံးသည့်ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းသည် Orlistat ကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမမိတ်ဆက်မီဖြစ်သည်။
သို့သော်အချို့သောသူများသည်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုလိုက်နာသည့်အခါ၌ပင်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အခြားသူများကသူတို့၏တိုးတက်မှုကုန်းပြင်မြင့်သဘာဝနည်းလမ်းများသုံးပြီးကြောင်းတွေ့ရှိရပေမည်။ ဤရွေ့ကားတစ် ဦး ချင်းစီ Orlistat သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းတစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်ကိုယ်အလေးချိန်တွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပြု, ဤအခြေအနေ၌သူတို့ကိုအကြိုးရှိကွောငျးတှေ့ရလိမ့်မည်။
(2) Orlistat ကိုသုံးခြင်း၏အန္တရာယ်များမှာအဘယ်နည်း။
Orlistat ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသူများသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Orlistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏စာရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူသင့်သည်။ Orlistat သည်အစွမ်းထက်သောဆေးဖြစ်သည်။ အဝလွန်သူတစ် ဦး အတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအာဟာရဓာတ်ဖြင့်စီစဉ်ထားသောကယ်လိုရီအကန့်အသတ်ရှိသောအစားအစာနှင့်အတူအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဆေး၏ OTC ဗားရှင်းကိုဆေးညွှန်းမပါဘဲ ၀ ယ်ရန်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သို့သော်မည်သူမျှ Orlistat ကို၎င်းတို့၏ဆရာဝန်နှင့်ကြိုတင်မပြောဘဲမသုံးသင့်ပါ။
လူနာများအား Xenical ဆေးဖြင့်ကုသမှုတွင်စမ်းသပ်မှုများ၌ ၂၇% သည်အ ၀ တ်များတွင်အဆီဓာတ်ပါသောအစွန်းများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၂၄% သောသုံးစွဲသူများသည်ဓာတ်ငွေ့ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးနောက်မှအတင်းအဓမ္မသန္ဓေတားခြင်းမှထွက်လာသည်။ အသုံးပြုသူ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် fecal အရေးတကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှု ၈% နှင့် ၈% သည်မြင်းမကျွေးမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အထူးသဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲချိန်တွင်သုံးစွဲသူများအတွက် ၀ မ်းလျှောရောဂါသည်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။
ဆေးနှင့်ဓာတ်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုမှာရှားပါးပြီးပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသုံးစွဲသူများကြုံတွေ့ရသောပုံမှန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဓာတ်ငွေ့တစ် ဦး အဆီပြန်ဥတုနှင့်အတူလိုက်ပါသွား
မစင်ချောင်ခြင်း၊ fecal အရေးတကြီးတိုးခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူ၏အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့် rectal pain
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်အားနည်းချက်၊ ရွှံ့စေးရောင်ထိုင်ခုံများ၊ ဆီးမှောင်မိုက်ခြင်း၊
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းသည် Orlistat ကိုအသုံးပြုသောအခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ပြည့်စုံသောစာရင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများကြုံတွေ့ရပါကသင်၏အတွေ့အကြုံကို FDA သို့ 1-800-FDA-1088 တွင်သတင်းပို့ပါ။
5. အသုံးပြုသူများ Orlistat အကြောင်းပြောနေတာကဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများမှအင်တာနက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့ကြောင့်ရလဒ်များစွာရရှိနိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Orlistat ထူးခြားသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သူများထံမှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရသူများအထိရှိသည်။
သို့သော်အ ၀ လွန်သူ (သို့) ၂၇ နှစ်ကျော် BMIs ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ရောဂါအများစုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံရှိပုံရသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များအားလုံးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံနေရသည်ဟုအသိပေးထားသည့်သုံးစွဲသူများထံမှဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်, ဒီတစ် ဦး ချင်းစီကိုမှန်ကန်စွာသူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်မဟာဗျူဟာပုံဖော်။ သူတို့အားလုံးသည်အာဟာရဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းပြီး ၄ င်းတို့၏ဆရာ ၀ န်နှင့်ပုံမှန်သုံးလတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ကအကြံပြုထားသောဆေးထိုးသည့် protocol ကိုမှီဝဲခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ Orlistat ရလဒ်များ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
"ငါ့နာမည် Ron, ငါကငါ့အသက်ကိုပျက်စီးစေသောအချက်အထိအဝလွန်ခဲ့သည်။ ရွေ့လျားမှုပြတင်းပေါက်ကနေထွက်လာပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးလာတာကြောင့်ဆရာဝန်ဆီအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ စာရွက်စာတမ်းကကျွန်တော့်ကိုအစားအသောက်သမားတစ်ယောက်နဲ့ထိတွေ့စေပြီးတစ်နေ့တာအတွက်ငါ့ရဲ့ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကိုငါနားလည်ခဲ့တယ်။
၆ လတာအစာစားပြီးနေ့တိုင်းပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာရလဒ်ကောင်းတွေတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့တိုးတက်မှုကအရှိန်လျော့သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ဆရာဝန်က Xenical (Orlistat) ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားမိသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဆေးကိုသုံးပြီးဒုတိယနေ့အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။
နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ငါဟာလူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ငါပန်းတိုင်အလေးချိန်တစ်ဝက်လောက်ရောက်နေပြီ၊ ပေါင်တွေလည်းဆက်မတက်တော့ဘူး။ "
Ron Swanson, Jacksonville, FL, USA ။
ဤဥပမာတွင် Ron ၏ရလဒ်သည်အကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမှန်ကန်မှသာလျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်တူညီသောရလဒ်များကိုသူတို့အတွက်ထပ်တူမလုပ်နိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
6. Orlistat ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်အဓိကနည်းလမ်းများ
အဝလွန်ခြင်းသည်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအမေရိကန်များ၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ အရွယ်ရောက်သူ၊ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ကလေးသူငယ်များတွင်အဝလွန်မှုနှုန်းမှာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်များသည်ပျံ့နှံ့မှုတိုးများလာခြင်း။
အဝလွန်ခြင်းသည်ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါစသည့်နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြnumerousနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါအခြေအနေသည်အသက် ၄၀ မှ ၈၅ နှစ်အရွယ်ရှိအမေရိကန်အားလုံး၏ ၁၈% သေဆုံးမှုကိုဆိုလိုသည်။
အမေရိကန်လူမျိုးအတော်များများသည်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ဆေးဝါးများနှင့်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အခြားကိုယ်အလေးချိန်နည်းခြင်းနည်းလမ်းများကိုအသုံးမပြုမီ၎င်းတို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အထများ၊ အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြောင်းလဲရန်မလုံလောက်ပါ။
အမေရိကန်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုတိုတိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။ မှန်ကန်သောအစာစားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များရရှိခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးမပြုမီသင့်အစာစားခြင်းနှင့် ဦး ဆုံးမှန်ကန်စွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရည်မှန်းချက်များအကြောင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ Orlistat ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ သင်၏ဆရာ ၀ န်ကသင့်အားအဆီဆုံးရှုံးမှုအတွက်သင်၏ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအစားအစာအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအာဟာရရှိသောဆရာဝန်ထံသို့သင့်ကိုပို့လိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကိုကြိုးစားသူများသည်ရလဒ်များကိုမြင်လိုပါက၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်အဖွဲ့တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သေချာစေရမည်။ သင်၏ဆရာဝန်၊ အာဟာရပညာရှင်၊ ရူပကုထုံးပညာရှင်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသင်တန်းပို့ချခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်သင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်။
Orlistat သည်ညှိထားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်သို့ဂျက်လောင်စာထည့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ လူနာများသည်၎င်းတို့၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထများကိုထိန်းချုပ်ထားသောအခါ Orlistat ကဲ့သို့သောကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ရလဒ်များကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
Orlistat ဆေးသောက်ရန်မဆုံးဖြတ်မီလူနာများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ပြီးသူတို့သည်ကုသမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
Orlistat နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်များကိုသုံးသပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ရောထွေးနေသောရလဒ်အိတ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် Orlistat ကိုယူပြီးမှန်ကန်သောအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုငှားရမ်းသူများသည်သူတို့လိုချင်သောရလဒ်ကိုရရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင် Orlistat ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်မက်ဖွယ်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောလူများစွာရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် Orlistat ကိုယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Orlistat သည်အဝလွန်သူနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသူများအားသူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်အားထုတ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တန်ပြန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြင့် FDA မှခွင့်ပြုထားသည်။
သတိပြုရန်မှာအရေးကြီးသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည့်လူနာများအနေဖြင့်လည်း၎င်းတို့သုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းအပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးလိုအပ်သည်။
et al Anderson က JW, Schwartz က SM, Hauptman J ကို။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အတန်အသင့်အသင့်အတင့်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်ကျသူများသည် ၁၆ ပတ်ကြာနှစ်ကြိမ်မျက်စိကွယ်၊ အမ်း Pharmacother ။ 16; 2006 (40): 10-1717
Smith က SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al ။ Orlistat 60 မီလီဂရမ်သည် visceral adipose တစ်ရှူးကိုလျော့ချပေးသည်။ ၂၄ ပတ်ကျပန်းကျပန်း၊ အဝလွန်ခြင်း (Silver Spring) ။ 24 ခုနှစ်; 2011 (19): 9-1796 ။
1288 Views စာ
ပစ်မှတ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါး Ibrutinib: သင်ဘာသိသလဲ
Synephrine HCL Powder - အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည် သင်က Pregabalin အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို